Baiboly pejy 39 - Ny Baiboly
Voalohany < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Manaraka Farany
Eksaody toko 14 (tohiny)
13Fa hoy kosa Moizy tamin'ny vahoaka: Aza matahotra fa mipetraha tsara eo ka zahao ny famonjena hataon'ny Tompo aminareo anio; fa ireo Ejipsiana hitanareo anio ireo tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. 14Iaveh no hiady ho anareo, fa hianareo mipetraha tsy amin'ahiahy. 15Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Nahoana no mitaraina amiko hianao? Ilazao ny zanak'Israely mba hiainga. 16Hianao manaingà ny tehinao sy maninjira ny tànanao eo ambonin'ny ranomasina dia hampisaraka roa azy; ary ny zanak'Israely kosa hamaky eo afovoany mandia tany maina, 17ary izaho hanamafy ny fon'ny Ejipsiana hanarahany azy ireo avy ao aoriana, ary hataoko miharihary ny voninahitro ao amin'i Faraona sy ny tafiny rehetra, mbamin'ny kalesiny amam-pitaingin-tsoavaliny. 18Ka ho fantatry ny Ejipsiana fa Iaveh aho, rahefa hanehoako ny voninahitro Faraona sy ny kalesy amam-pitaingin-tsoavaliny.
31Hitan'Israely ny tànana maherin'ny Tompo nasehony tamin'ny namelezany ny Ejipsiana, ka natahotra an'ny Tompo ny vahoaka, ary nino an'ny Tompo sy Moizy mpanompony.
Eksaody toko 15
1Tamin'izany Moizy sy ny zanak'Israely nanao izao hira izao tamin'ny Tompo. Hoy izy:
Hihira ho an'ny Tompo aho, fa efa naneho ny voninahiny izy;
Nariany any an-dranomasina ny soavaly amam-pitaingina azy.
2Iaveh no heriko sy fototry ny tonon-kirako,
Izy no namonjy ahy.
Izy no Andriamanitro, ka hankalazaiko,
Sady Andriamanitry ny raiko, ka hoderaiko.
3Mpiady mahery Iaveh,
Ary Iaveh no anarany.
4Ny kalesy aman-tafik'i Faraona navariny an-dranomasina;
Ny kapiteny voafantina natelin'ny ranomasina Mena;
5Nosaforan'ny rano ireny,
Nilentika amin'ny farany ambany toy ny vato izy ireo.
6Tompo o! nigagana noho ny heriny ny tànanao havanana,
Tompo o! nanorotoro ny fahavalo ny tànanao havanana.
7Ny fiandriananao mihoa-pampana,
No andriganana ny fahavalonao;
Fa mampirehitra ny hatezeranao hianao,
Dia levona toy ny mololo ireny.
8Noho ny fofon'ain'ny vavoronao,
Niangona niavosa ny rano,
Niantsavovona ny onjan-drano;
Raikitra nandry tao anaty mason-dranomasina ny alon-drano.
9Hoy ny fahavalo: Hanenjika, ka hahatratra,
Dia hizara babo aho,
Ho afa-diana aho amin'ny valy fatiko.
Hotsoahako ny sabatra dia haringan'ny tànako ireny.
10Kanjo vao notsofin'ny fofon'ainao dia safotry ny rano izy,
Ka nilentika toy ny firaka anatin'ny ranomasim-be.
11Iza moa no toa anao, amin'ireo andriamanitra, ry Tompo o!
Iza moa no toa anao izay mendrika indrindra noho ny fahamasinana,
Izay atahorana, na eo am-piderana anao aza, mpanao fahagagana?
12Naninjitra ny tananao havanana hianao,
dia nitelina an'ireny ny tany.
13Ny fahasoavanao no hitondranao ity vahoaka navotanao ity;
Ny fahefanao no hitarihanao azy ho any amin'ny fonenanao masina.
14Vao nandre izany ny firenena dia nangovitra;
Raiki-tahotra ny Filistìna;
15Nivadi-po ambony ihany ireo andrian'i Edoma;
Tera-kovitra ny maherin'i Moaba;
Niraviravy tanana avokoa ny mponina any Kanaana;
16Ho resin-tahotra sy zoim-pahoriana izy ireo.
Noho ny herin-tsandrinao, hanjary toa vato tsy mahahetsika izy ireo.
Mandra-pandalon'ny vahoakanao, ry Tompo o,
Mandra-pandalon'ny vahoaka izay navotanao.
17Hitondra sy hamponina azy hianao
Eo amin'ny tendrombohitry ny lovanao,
Dia eo amin'ilay toerana nataonao ho fonenanao, ry Tompo o,
Eo amin'ny fitoerana masina namboarin'ny tananao, ry Tompo o!
18Hanjaka mandrakizay doria Iaveh!
19Fa ny soavalin'i Faraona
Sy ny kalesy amam-pitaingin-tsoavaliny dia tafiditra ny ranomasina;
Ka nosaforan'ny Tompo
Ny ranon'ny ranomasina izy ireo,
Ary ny zanak'Israely kosa nandia
Tany maina teo afovoan'ny ranomasina.
20Nandray langoroany tapaka Maria, mpaminany vavy, anabavin'i Aarona, ary nitondra langoroany nanaraka azy koa ny vehivavy rehetra, dia nandihy. 21Ka izao no navalin'i Maria ny zanak'Isarely:
Mihira ho an'ny Tompo fa efa naneho ny voninahiny izy.
Navariny any an-dranomasina ny soavaly amam-pitaingina azy.
22Dia nasain'i Moizy niainga avy ao amin'ny ranomasina Mena Israely. Nandroso nankany amin'ny efitra Sora, ary hateloana izy nandeha tsy nahita rano tamin'io efitra io. 23Nony tonga tao Mara izy ireo tsy nahasotro ny rano tao Marà fa nangidy ny rano, ka izany no niantsoana io fitoerana io hoe Marà. 24Nimonomonona tamin'i Moizy ny vahoaka, nanao hoe: Inona no hosotroinay. 25Moizy nitaraina tamin'ny Tompo, ka notoroan'ny Tompo hazo izy, dia natsipiny tao anaty rano io, dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'ny Tompo ny fitsipika aman-dalàna ny vahoaka sy nizahany toetra azy. 26Hoy izy: Raha mihaino ny feon'ny Tompo Andriamanitrao hianao, raha manao izay mahitsy eo anatrehany, raha mampandry sofina amin'ny didiny ary mitandrina ny lalàny rehetra dia tsy hisy hameliko anao ireny aretina nafitsoko ny Ejipsiana ireny, fa Iaveh manasitrana anao aho.
27Dia tonga tao elima izy ireo, izay nisy loharano roa ambin'ny folo sy foto-palma fito-polo, ka nitoby teo akaikin'ny rano izy.
4Dia hoy Iaveh tamin'i Moizy: Indro aho handatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo. Hivoaka ny olona ka isan'andro dia hanangona izay sahaza hohaniny amin'ny indray andro, mba hizahako toetra azy, na handeha araka ny lalàko izy ireo na tsia.
Pejy: Voalohany < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Manaraka Farany